JUNE&MAY: MAY ON MAY
Posted by JuneOne at 8:30 AM
Happy two years old birthday, May Lin Lin! Wish you happiness, good health and all the best in your life.
JuneOne May 13, 2012 at 9:21 AM
Thanks you for your wish.
Myo Mon Yee Oo May 13, 2012 at 10:47 AM
JuneOne May 13, 2012 at 11:49 AM
Thank you Mon Mon.
Happy Birthday to You ... Baby may..
Hmone & family...
Thanks Hmone & family...(copy n paste)
Rita May 13, 2012 at 11:17 AM
happy birthday ချစ်စရာ မေကလေး
JuneOne May 13, 2012 at 11:50 AM
မေ က ပိုသွက်တဲ့ပုံပေါ့..ကောင်းတယ်...
အရင် Edwin စာရေးနေတဲ့ ပုံကတည်းက သူတို့ ချစ်ကြတာ သိသာတယ်..။
မောင်နှမ ၂ ယောက် အဖော်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ.....။
ခုန သမီးမအိပ်သေးလို့ ရှည်ရှည်မရေးနိုငဘူး.. :))
Anonymous May 13, 2012 at 12:33 PM
မေ့ ဗီဒီယို ခုမှ ကြည့်ရတယ်... အော်နေတာတွေ မကြားရဘူး.. ကလေးနိုးမှာစိုးလို့ အသံတိုးထားလို့...။
ကလေးတွေ ဗီဒီယိုကို ယူကျုမှာ ချယ်နယ်လုပ်ပြီး တင်ပါလား.. ဘလော့ မှာ လင့်ကလေးပဲ ချပြလိုက်... သွားကြည့်မယ်လေ...
JuneOne May 13, 2012 at 12:41 PM
ချန်နယ်လုပ်ထားတာရှိတယ်။မတင်ဖြစ်တာ။တင်မယ်။မေ က အာသွက်ခရာ။အခုပဲ BD ကိတ် ခွဲပြီးတာ happy birthday happy birthday နဲ့ ပါးစပ်ကမချတော့ဘူး။
Happy Birthday toavery smart girl!
JuneOne May 13, 2012 at 4:39 PM
Chothettant May 13, 2012 at 8:38 PM
JuneOne May 13, 2012 at 9:31 PM
သမီးကလေးကချစ်စရာ ... မောင်နှမတည့် ကြတာကောင်းလိုက်တာ .... အိမ်က၂ယောက်ကတော့တစ်ချိန်လုံးသတ်နေကြတာ ... တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတွေ့ ရင်တော့ လဲမေးနေကြပြန်ရော ...
ဲံHappy Birthday ပါ မေ ကလေး ရေ ....
JuneOne May 13, 2012 at 9:32 PM
ကျေးဇူးပါ အမ။သမီးလေးက အလျော့ပေးတယ်။
Thandar Lwin May 13, 2012 at 10:34 PM
ချစ်စရာ သားလေးသမီးလေးတွေ နဲ့ ပျော်စရာ မိသားစုလေး...း)
သမီးလေးမေ ၂ နှစ်ပြည့်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင် ကျန်းမာပါစေသော်ဝ်။
JuneOne May 14, 2012 at 9:26 AM
Thank u very much Haymar's mom
Thet Nandar Family May 14, 2012 at 8:29 AM
ஜ۩۞۩ஜ Happy Birthday, Tha Mee Lay " May " ! ஜ۩۞۩ஜ
JuneOne May 14, 2012 at 9:27 AM
Thankalot 'Thet'